चुनावको मुखैमा माओवादी नेताले दिए राजनीनामा, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
चुनावको मुखैमा माओवादी नेताले दिए राजनीनामा, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको घोषणा गरेका ठम्मरबहादुर विष्ट आज नेकपा एमाले प्रवेश गर्दै छन्। उनी एमाले प्रवेश गर्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विष्टलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका छन्।
आज दिउँसो वीरेन्द्रनगरको सिटी हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विष्टलाई एमालेमा स्वागत गर्नेछन्। विष्टले पनि आफू आज एमालेमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी दिए।
उनले भने, आज मसहित अन्य नेता–कार्यकर्ताहरु एमालेमा समाहित हुँदैछौं। उनले आज सांकेतिक रुपमा एमालेमा समाहित हुने र अन्य कार्यकर्ताहरुलाई समेट्दै अघि बढ्ने बताए।
सुर्खेतको क्षेत्र नम्बर १ कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित विष्ट कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक थिए। पार्टीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेलेको भन्दै उनले माओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ ।दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले आज प्रेस नोट जारी गर्दै विष्टलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
विष्ट नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। उनले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। उनलाई चैत ३ गते बसेको प्रदेशसभा दलको बैठकले राजीनामा फिर्ता लिएर नियमित काममा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको थियो।
तर त्यो निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै उनलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको शाहीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा तालमेल गर्न माओवादी नजाने, बरु अरु पार्टी माओवादीकहाँ आउनुपर्ने बताएका छन्।
जनतामा राष्ट्र र लोकतन्त्र जोगाउने पार्टी माओवादी नै रहेछ भन्ने महसुस भएको भन्दै उनले आफूहरु नै पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको समेत बताए ।पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
देशैभरी एकचोटी फेरि हेर्नुपर्ने र दिनुपर्ने माओवादीलाई नै रहेछ भन्ने जनमत बन्दै गएको छ। हेर्नुहोला, एक महिनाभित्र अरु सबै पार्टीहरु माओवादीसँग तालमेल गर्न आउनुपर्छ, हामी जाने होइन।
किनभने यो देशको परिवर्तनको बाहक हामी हौं। देशभरिको स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनातिर जाँदैछौं, प्रचण्डले अगाडि भने, अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने।
र यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने, बीचमा हामीले गल्ती गरेछौं भन्ने रियलाइजेसन भएको छ। अबको चुनावमा आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने उनले बताए।
प्रचण्डले भने, अबको चुनावमा हामी बैशाखी कसैको टेकेर होइन, आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछौंचुनावी गठबन्धनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको विकल्प नसोचेको बताए। यद्यपि धेरै कुरा कांग्रेसमा भर पर्ने पनि उनले बताए।
३ चैतमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले लखेट्यो भने एमालेसँग गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न भनेर बोलेकोबारे पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले अहिले भर्खरै एमालेसँग गठबन्धन भइहाल्छ भन्न नखोजेको बताए।
त्यो कुरा आफूले राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा भनेको प्रष्टीकरण प्रचण्डले दिए। प्रचण्डले भने, ‘एकजना गुरुङ छन् नि धनराज गुरुङ हात्तीको कानमा चमेरा कि के भनेका छन्, यस्तै भाषा के बडो सुन्नै गाह्रो।
तिनलाई भनेको हो, त्यस्तालाई भनेको हो। त्यसै गर्छन् भने त हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउँछ तर अहिले हामीले त्यता सोचेका छैनौं। अहिले यो गठबन्धनलाई नै लिएर जाने हो।